Xarunta Bixiyaha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Xariirka Bixiyaha ee HealthMAPS
Macluumaadka bukaanka waxaa laga heli karaa bogga bixiyaha, HealthMAPS. U isticmaal inaad gasho sheegashooyinka xubinta, hubi u-qalmitaanka, xaqiijiso dheefaha xubinta, iyo in ka badan.
SOO SAAR LOOGAHA DEBEDA
Kheyraadka Lagu Taageerayo Bixiyeyaashayada iyo Nidaamkooda Daryeel.
La soco isbeddelada ugu dambeeya ee ku saabsan qaacidooyinkayaga caafimaad, siyaasadaha isticmaalka, xeerarka biilasha iyo xeerarka kale sida tababarrada loo baahan yahay. Raadi ilaha aad ugu baahan tahay si aad ugu daryeeshid xubnaheenna - bukaannadaada.
Dib-u-eegis ku sameyno siyaasadaha maaraynta isticmaalka hadda iyo shuruudaha daryeelka caafimaad. Soo gal bogga maaraynta daryeelka (JIVA) si aad u soo gudbiso codsiyada.
Ku hel cusbooneysiinta ugu dambeysa ee Medicare joornaalada bixiyaha, tilmaamaha bukaan socodka, lambarrada biilasha iyo macluumaadka khadka caawinta.
Buugga Bixiyaha wuxuu dulmar guud ka bixinayaa nidaamyada muhiimka ah, qalabka tababarka iyo tixraacyada kaa caawinaya inaad u adeegto xubnaheenna.
Laybareeriga kheyraadka waxaa ku jira shabakadaha faa iidooyinka xubnaha, tilmaamaha bukaan socodka, xeerarka biilasha iyo siyaasadaha kale ee adeeg bixiyaha.
Baro wax badan oo ku saabsan ilaha caafimaadka habdhaqanka ee ay heli karaan xubnuhu waxaadna eegtaa soo koobitaanka adeegyada lagu daboolay qorshayaasheena.
Ma taqaanaa sida loogu gudbiyo xubnaha barnaamijyada maaraynta kiiska? Waxaan ka taageernaa caafimaadka xubinta adeegyo dheeri ah oo gudaha ah.
Waxaan qiimeyneynaa wax ku oolnimada daryeelka annaga oo ogaaneyna khataraha, baahiyaha, iyo yoolalka xubnahayaga iyo sameynta qorshe howleed.
NAGU SOO BIIR Shabakadeena
Miyaad xiiseyneysaa inaad gaarsiiso daryeelka ugu tayada sareeya bukaannada ku jira bulshooyinka aan loo adeegin? Ka mid noqo qoyskeena bixiyeyaasha.
Waxaan ku helay CHPW caawimaadda mid ka mid ah dhakhaatiirteyda. Ka dib markii aan u beddelay, noloshaydu waxay noqotay mid la yaab leh oo si fudud loo hagaajiyay. Waxay ansixiyeen imtixaan kasta oo aan u baahdo, waxoogaa dib u dhac ah kuma lahan waqtiyada jawaabtooda, iyo adeegyadooda macaamiisha ayaa ugu sarreeyay.
Joe D.Medicare Xubin
BIXIYAYAASHA SU'AALAHA AAD LA ISWEYDIIYO
Ma u baahan tahay caawimaad bilowga sidii adeeg bixiye CHPW? Waxaan halkan u joognaa inaan ka taageerno bixiyeyaasha habka daryeelka aan xuduud lahayn ee bukaanka. Raadi macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan marin u helka bogga adeeg bixiyaha, biilasha iyo u diritaanka siyaasadaha iyo dhaqamada kale ee daryeelka.